Hafu-Yakapetwa, rudzi rutsva rweRowHammer kurwisa DRAM | Linux Vakapindwa muropa
Hafu-Ruviri, rudzi rutsva rweRowHammer kurwisa muDRAM
Vatsvakurudzi veGoogle vakaburitswa Mazuva mashoma apfuura nzira nyowani yekurwisa yeRowHammer inonzi "Half-Double"que inoshandura zvirimo zvemunhu mabits enesimba memory kuwana mukana (DRAM). Kurwiswa kunoitwazve mune mamwe emazuva ano machipisi eDRAM, ayo vagadziri vakakwanisa kudzikisa geometry yesero.
Kune avo vasingazive mhando yekurwisa iyo RowHammer iri, iwe unofanirwa kuziva kuti inobvumidza kutsausa zvirimo zvemunhu mabits e RAM kuverenga zvakapetwa data kubva kune dzakavakidzana ndangariro maseru.
Sezvo DRAM iri yemaviri-akayera maseru, rimwe nerimwe riine capacitor uye transistor, kutora kuenderera kuverengwa munzvimbo imwechete yekurangarira kunoguma nekuchinja kwemagetsi uye anomalies, zvichikonzera kurasikirwa kudiki kwemutero. Mumasero akavakidzana. Kana kuverenga kwakanyanya zvakakwana, saka sero iri pedyo inogona kurasikirwa nemari yakawanda yakakwana uye inotevera yekumutsiridza haizowana nguva yekudzoreredza mamiriro ayo, izvo zvinoita kuti kuve neshanduko mukukosha kwedata rakachengetwa.
Kuchengetedza kubva kuRowHammer, vagadziri vezvipenga vaita iyo TRR mashandiro (Target Row Refresh), iyo inodzivirira pakukanganiswa kwemasero mumitsara iri padhuze.
Vatsvagiri veGoogle vanotaura kuti pachinyakare, RowHammer yakanzwisiswa kushanda pachinhambwe chemutsara mumwe: kana mutsara weDRAM ukawanika wadzokororwa ("anorwisa"), shanduko diki dzinowanikwa chete mumitsara miviri iri padhuze (iyo "Vanotambudzwa") .
Asi izvi zvachinja sezvo mamwe maRowHammer ekurwisa akasiyana aonekwa uye izvi imhaka yekuti dambudziko nderekuti hapana nzira yakabatana yekushandisa TRR uye mugadziri wega wega anodudzira TRR nenzira yavo, vachishandisa yavo yekuzvidzivirira sarudzo uye vasina kuburitsa ruzivo rwekushandisa.
Uye izvi zvinoratidzwa neHalf-Double nzira iyo inobvumidza kudzivirira idzi dziviriro nekudzishandisa kuitira kuti kukanganisa kusingogumira kumitsara iripedyo uye kupararira kune mamwe marondedzero, kunyangwe padiki padiki.
Google mainjiniya ndaratidza kuti:
Kune akateedzana ndangariro mitsara "A", "B uye C", zvinokwanisika kurwisa mutsetse "C" uine mukana wakanyanya kuwana mutsetse "A" uye zvishoma zviitwa zvine mutsetse mutsetse "B". Kuwanika kumutsara «B» «panguva yekurwiswa, inoita isina-mitsara mutoro yekudonha uye inobvumidza kushandiswa kwetambo» B «sekufambisa kududzira iyo Rowhammer mhedzisiro yetambo» A «ku» C «.
Kusiyana neTrRespass kurwisa, iyo inobata zvikanganiso mukuitwa kwakasiyana siyana yesero yekutsauka yekudzivirira maitiro, kurwisa Hafu-Yakapetwa inoenderana nehunhu hunhu hwesilic substrate. Hafu-Ruviri inoratidza kuti zvingangoitika mhedzisiro yekudonha inotungamira kuRowHammer inotsamira kure, pane kunanga kunamatira kwesero.
Nekuderera kwesero geometry mumachipisi emazuva ano, nharaunda yesimba rekukanganisa inowedzerawo, saka zvinogoneka kuti mhedzisiro inogona kucherechedzwa chinhambwe chemitsara inopfuura miviri. Izvo zvinoonekwa kuti, pamwe chete neJEDEC Association, mazano akati wandei akaongororwa kuti aongorore nzira dzingaite dzekuvharira rudzi urwu rwekurwiswa.
Iyo nzira yakaziviswa nekuti Google inotenda kuti chidzidzo chakaitwa zvakanyanya kuwedzera kunzwisisa kweiyo Rowhammer chiitiko uye inosimbisa kukosha kwekuunza pamwechete vaongorori, vagadziri vechipisi, nevamwe vanobatana kuti vagadzire yakazara, yakareba-refu mhinduro yekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hafu-Ruviri, rudzi rutsva rweRowHammer kurwisa muDRAM
Iyo Telegraph vs. Wikipedia. Iye anokodzera iyo se "wokepedia"